sokajy vokatra elektronika sokajy | Key-Components.com
Capacitors dia fitaovana izay mitahiry angovo herinaratra sy ny herinaratra.
Origine et histoire de ny haavon'ny dia atao fitaovana, ny vato krystaly oscillator dia mavitrika fitaovana, ny vato krystaly sy ivelany ny haavon'ny oscillation faritra, fanamafisam-peo faritra, fari
Switch dia manondro ny elektronika singa izay afaka manokatra ny fizaran-tany, amin'izao fotoana izao, na hanelingelina ataovy hirotsaka amin'ny faritra hafa.
Circuit fiarovana dia tena mba hiarovana ny faritra elektronika singa ao amin'ny raharaha overvoltage, overcurrent, misamboaravoara, fitsabahan'ny herinaratra avy amin'ny fahavoazana.
Ny sensor dia tratra fitaovana izay afaka mahatsapa ny norefesiny vaovao sy afaka Output, mamindra, dingana, fivarotana, fanehoana, firaketana an-tsoratra ary mifehy ny nahatsapa vaovao.
Radio matetika (RF) dia matetika ny herinaratra izay azo erỳ ry zareo an habakabaka.
Connector, amin'ny ankapobeny manondro ny herinaratra connector.
A resistor, izay misy amin'izao fotoana-mametra singa, manana raikitra fanoherana, matetika Pins roa, izay mametra ny habetsaky ny tondra ankehitriny amin'ny sampana izay dia mifandray.
Tariby fivoriambe tsotra miainga amin'ny telegrama jumpers amin'ny fitondrana sy ny haingam-pandeha angon-drakitra telegrama ho sarotra ampondra.
Ny hery loharanom-baovao dia fitaovana izay niova fo hafa karazana angovo ho angovo herinaratra.
Ny fitsipi-pifehezana ara-teknika ahitàna ny fitambaran'ny hazavana sy elektronika.
Heat fitantanana dia ny fitantanana ny hafanana na ny mari-pana ny rafitra antsoina hoe hafanana fitantanana
Ny fitaovana dia fitaovana ampiasaina ho an'ny asa.
Ny famatsiana ny hery ivelany dia ny tsipika ny hery hafa ankoatra alalan'ny terminal fifandraisana.
tariby, tariby dia ampiasaina ho an'ny herinaratra hery, herinaratra sy fandefasana mifandray tanjon'ny ara-nofo, matetika ny isan'ny cores, kely savaivony, rafitra tsotra antsoina hoe tariby, hafa an
Tariby sy ny tariby dia ampiasaina mba mampita herinaratra (andriamby) angovo, vaovao, sy ny vokatra izay niova fo tariby angovo herinaratra.
Demoboard dia faritra birao ampiasaina rafitra nandinika lalina development.Development Boards, Kits, rindrambaiko
Industrial automatique dia be ampiasaina ao amin'ny orinasa famokarana mandeha ho azy fanaraha-maso, fitaovana mandeha ho azy fanovana hisolo ny boky asa ny milina sy ny rafitra ho an'ny milina fanodi
Fampitàna dia herinaratra fitaovana fanaraha-maso, izay manana ny asa ny fitokana-monina.
Horonam-peo, lakaoly, Fitaovana
Ampitomboy lovia akorany tahony, hidin-trano, latch indray Accessories vilia boaty efajoro singa Mitrosa Accessories Mitrosa singa Mitrosa hafanana fitantanana
Fasteners dia karazana milina izay ampiasaina be fastening fifandraisana.
Ny sivana dia sivana faritra ahitana ny capacitance, inductance sy ny fanoherana.
Potentiometer dia fanoherana singa telo Leads sy ny fanoherana dia azo ahitsy sarobidy araka ny fiovana sasany fitsipika.
Optoelectronic isolator (OC) dia antsoina koa hoe optoelectronic coupler, optoelectronic coupler, na optocoupler ho fohy.
Maso, fisafoana, fizahan-toetra.
Labels, Famantarana, Sakana, Identification
Mpanova dia fitaovana izay mampiasa ny fitsipiky ny herinaratra induction hanova ny As malefaka.
Motor manondro ny herinaratra fitaovana izay afaka hiova finoana na hamindra angovo herinaratra araka ny lalàna ny herinaratra induction.
Vahaolana momba ny tambajotra
Karatra fahatsiarovana, modely
Karatra SD namaky teny sy nanoratra dia manondro ny tokana microcomputer Chip namaky teny sy nanoratra karatra SD / MD karatra.
Welding, fantatra koa amin'ny hoe welding, welding.
Audio, ampiasaina ho toy ny ankapobeny famaritana ny feo isan-karazany sy feo mifandray amin'ny fitaovana.
Ny bateria dia fitaovana izay niova fo ho angovo simika herinaratra alalan'ny fanaovana kapoaka na ny tanky misy ny vahaolana sy ny vy electrolyte electrodes ny hiteraka ny herinaratra.
Electrostatic marary mitsika (ESD) manondro ny anjara-raharaha famindram vokatry ny fifandraisana amin'ny hafa ny zavatra voasakantsakan'ny sy ny hery anaty.
Andriamby singa dia matetika ahitana windings sy cores, indrindra anisan'izany ny Transformers sy inductors.
-Dalana, fitaovana fiarovana no tena ampiasaina ny fiarovana sy ny fanaraha-maso fandrefesana, fandrefesana, ny fanaraha-maso sy ny fifandraisana ao amin'ny elanelam-potoana fiasan'ny vondrona samihaf
Tool fitaovana, fitaovana samy hafa rehetra, dia afaka hametraka fitaovana fitaovana, zaridaina fitaovana, fikojakojana fitaovana, fitaovana fitiliana, herinaratra fitaovana, fitaovana fitaovana fiara
Computer fitaovana fampiasa keyboard, totozy, scanner sy ny fahan'ny fitaovana;
Rehefa nandinika lalina ny teknolojia dia "manokana" solosaina teknolojia, izay miresaka momba ny fampiharana manokana, toy ny tambajotra, ny fifandraisana, raki-peo, lahatsary, orinasa fanaraha-maso
Manufacturers / DIY, fanabeazana, orinasa / DIY, ny fanabeazana mpizara, 3D pirinty Accessories, 3D pirinty, wearable, milina fitaovana, prototyping, fitaovana, fitaovana, fitaovana fanabeazana, boky,
Optical tratra dia mifototra amin'ny foto-kevitra ny Optical ny welding famokarana ny mahazatra takaitra mamantatra fitaovana.